Thursday October 03, 2019 - 17:44:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaashii hore ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sare uqaaday abaabulka siyaasadeed ee ka dhanka ah Farmaajo iyo Kheyre oo ay ka wadaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Xasan Gurguurte iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa kulamo siyaasadeed oo lagu sheegay xasaasi ka wada Hoteello kuyaal gobolka Banaadir, labadan siyaasi oo taageerayaal xooggan ku dhax leh golayaasha baarlamaanka ayaa qabanaya shirar siyaasadeed oo dhammaantood ka dhan ah nidaamka Farmaajo.
Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh oo la sheegay in ay taageero dhaqaale ka helayaan dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraatka carabta ayaa sare uqaaday dhaliilaha ay ujeedinayaan xukuumadda hadda jirta.
Xasan Sheekh oo warbaahinta lahadlayay ayaa sheegay in dowladda Farmaajo ay lumisay kalsoonidii lagu qabay wuxuuna ku eedeeyay in ay caburin ku hayso siyaasiyiinta mucaaradka ah "Afka la iskama qaban karo, kalsooni siyaasadeed waa in la abuuro, haddii aan kalsooni la helin Jubbaland lama arkaayo, Puntland lama arki doono, Galmudugna waxa kasoo baxaya wax fiican noqon maayaan waa in dowladdu ogolaataa in ladhaliilo" ayuu yiri Xasan Sheekh.
Shariif Sheekh Axmed ayaa isna ka digay burbur ku yimaada dowladda Federaalka isagoo Farmaajo iyo Kheyre ku eedeeyay in ay wadaan isku dayo ay xil kororsi ku sameynayaan, illaa iyo hadda Villa Somalia wax jawaab ah masiin madaxweynayaashii hore ee dowladda Federaalka oo dagaal siyaasadeed wada.